Shiinaha warshadda la tuuro ee laastikada jilicsan iyo soosaarayaasha | Limeng
La tuuro laastikada dhegaha dhegaha
Shirkaddayadu waxay soo dhoofisay qalab wax soo saar xirfadeed iyo tikniyoolajiyad casri ah oo loogu talagalay soo saarista qaybta dhegaha ee laastikada ah. Waxyaabaha ceyriin ee ugu muhiimsan waa chinlon iyo spandex. Waxaan soo bandhigi karnaa band-ga dhegta dhegaha oo midabbo badan leh. Qeybtaan loo yaqaan 'loop loop' waa midab cad, ballaciisuna waa 3mm wareegsan. Waxay ku habboon tahay nooca fidsan ee wajiga lagu daboolo ee caafimaadka ama qalliinka ah.
Badanaa, dhexda dhegaha dhegaha ee waji xidhka, xooggeedu waa 17 N.
Waxaan haynaa boorsooyin ama xirmo duub ah
Maraakiibta waxaa lagu sameyn karaa hawo si deg deg ah.
Xulashada maaskarada la tuuri karo, waxaa ka wanaagsan in la doorto waji-qubyo qalliin oo la tuuri karo, oo erayada maaskarada qalliinka ayaa lagu soo bandhigi doonaa baakadka.
Maaskarada qalliinka caafimaadku aad ayey ugu fiican yihiin ka hortagga daadashada dareeraha, kuwaas oo ay ka mid yihiin saamaynta shaandhaynta ee walxaha ka weyn 5 mikroon ee hawada ku jira in ka badan 90%. Marka laga hadlayo awoodda kahortagga faafitaanka bakteeriyada iyo dhibcaha fayraska, maaskarada qalliinka aad ayey u wanaagsan yihiin.Ka hortagi karaan fayraska iyo bakteeriyada inay si habsami leh ugu soo duulaan marinnada neefsashada, waxay leeyihiin saameynta ilaalinta dahaarka guud ahaan waxay ka kooban tahay saddex lakab, lakabka sare waa lakabka biyuhu xiraan, lakabka dhexe waa lakabka shaandhada, lakabka gudaha waa lakabka raaxada, badanaa saamaynta anti-xasaasiyadda, sidoo kale waxaa jira sanka iyo dhabanka iyo dhegaha dhegaha, maaskarada ayaa ugu habboon maqaarka. Waqtiga, waxaa lagama maarmaan ah in si sax ah loo xiro maaskarada, si si wanaagsan looga ciyaaro doorka ilaalinta.
Caabuqa Novel Coronavirus ayaa si gaar ah u daran sanadkan. Kaliya haddii qof kasta oo naga mid ah uu si miyir qab ah oo is-edbinta ah u sameeyo shaqo wanaagsan oo ilaalin ah, gacmaha si joogto ah u dhaqo, si joogto ah u neefsado, kala fogaanshaha bulshada kana dhigo caado maalinle ah iyo dhaqan caafimaad oo miyir qab ah ayaan ka fogaan karnaa infekshinka ka yimaada cudurka cusub ee Coronavirus.
Maaskaro caafimaad oo la tuuri karo ama maaskaro qalliin waa in lagu xidho xaaladaha soo socda
1. Bas, taksi, tababare, tareen iyo shaqaalaha kale ee dadweynaha iyo rakaabka.
2. Dhammaan shaqaalaha ka shaqeeya goobaha caamka ah ee dadku isugu yimaadaan, sida suuqyada laga dukaameysto, dukaamada waaweyn, hoolalka bandhigga, matxafyada, jimicsiyada, shineemooyinka iyo tiyaatarada, hoolalka shirarka, aqoon isweydaarsiyada, kafateeriyada internetka, wiishashka iwm.
3. Dhammaan shaqaalaha meelaha bannaanka ka ah sida jardiinooyinka iyo fagaarayaasha aan ilaalin karin masaafada bulshada oo ka badan 1 mitir.
4. Ka shaqee shaqaalaha iyo shaqaalaha dukaamada, maqaayadaha, hoollada cuntada, hoteelada, dhammaan noocyada "albaabada yaryar", miisaska soo dhaweynta shirkadaha iyo meelaha kale.
5. Shaqaalaha isbitaalka ee daaweynta raadinaya, booqashada ama wehelinaya.
6. Shaqaalaha muhaajiriinta ah iyo bixiyeyaasha adeegga ee guryaha waayeelka, guryaha daryeelka, xabsiyada iyo xarumaha caafimaadka dhimirka.
Xidho maaskarada si aad u ilaaliso aniga iyo adiga
Hore: Maaskarada wajiga ee la tuuro
Xiga: Tuubada muunad qaadista la tuuro
La tuuro Earloop
La tuuro Earloop Wixii Maaskaro Maaskaro ah
La tuuro Elastic Band Earloop
Maaskarada Wajiga Earloop
Maaskaro Wajiga loogu talagalay oo la tuuro
Maaskarada wajiga ee la tuuro
Tuubada muunad qaadista la tuuro
NO.18-22 Wadada Lashan, Degmada Shizhong, Jinan, Shandong